I-china CY-3 (yangaphakathi yokutyhala kwempahla yokutsala iimpahla) kwendawo yokuhlala yabenzi kunye nabathengisi | Jialong
Impilo iqala ngokumisa iimpahla
Uluhlu lwezinto Ingxubevange A00aluminium Ukwahlula imveliso iipali ezintathu / iipali ezine
umbala I-Champagne / isilivere
Ubude ipali yokomisa 0.6m / 0.8m / 1m / 1.5m / 2m / 2.5m / 3m
(Singayilungisa ngentando phakathi kwe-0.5m kunye ne-3M ukuba kunyanzelekile)
ubude 0.8m I-1.0m 1.5m 2m 2.5m Ubunzima benkxaso enye
Inani elifanelekileyo lemingxunya 5 6 8 12 15
Ubunzima bezibonda ezintathu 0.67kg 0.84kg 1.26kg 1.68kg 2.1kg 2.15kg
Ubunzima bezibonda ezine 0.89kg 1.12kg 1.68kg 2.24kg 2.8kg 2.30kg
Inkcukacha ngomlomo wombhobho
Ukutyeba kodonga lweshaneli yentsimbi
Ilinganiswe ngokulinganayo ngama-50 kg, anokuhlangabezana neemfuno zosapho lonke ukuze zome. Inkqubo ephezulu ye-oxidation yamkelwe.
Umbala we-champagne uphathwa nge-electrophoresis, engacimiyo, engenamhlwa, engahlali ixesha elide, kwaye egcina imveliso ikhanya kwaye intsha.
Ijelo lenkxaso yesinyithi lamkela uyilo lwendawo yokubhabha, kwaye amandla enkxaso omelele kuneCY-1, CY-2, kwaye umbhobho uyajiya kwaye ubonakala ngathi ubume kakhulu komoya.
Ngentando:Sikwaxhasa ulwenziwo lombhobho, ukongeza inkxaso ngaphakathi kumbhobho ukwandisa i-aesthetics ngelixa uzinzile ngakumbi.
Faka:Kulula ukuyifaka nokudibanisa. Logama nje ujija isikrufu esinye, ungasusa kwaye usiphathe. Kwikhaya eliphakamileyo, yongeza indlela yokomisa umoya engangeniyo ngaphakathi.
Ingxelo yoMthengi:Ixabiso elincinci alichaphazeli umgangatho wakhe. Ingaphaya kokucinga. Yenziwe kakuhle ngokweenkcukacha. Ihlala icinga ukuba iyakushukuma kakhulu, kodwa yayizinzile emva kofakelo, esombulule ingxaki yokukhanya okungonelanga.
Iluncedo:Ukutyhala kunye nokutsala iimpahla zethu akunakusetyenziselwa ukomisa iimpahla kuphela, ukuba ibhalkhoni inde ngokwaneleyo, singenza ngokwezifiso ipali ende, ukuze sikwazi ukomisa i-quilt, kunye nokuphelisa ngcono ukubulala iintsholongwane kunye nokubulala iintsholongwane. Ekuvelisweni kweempahla ezingaphezulu kweminyaka elishumi, umgangatho uya kuqinisekisa ngakumbi xa kuthelekiswa nabanye abavelisi, kwaye siya kunika ingqalelo ngakumbi kwezinye iinkcukacha. Izinto eziluhlaza esizisebenzisayo yi-A00 aluminium, ekungekho lula ukuyiphelisa kunye ne-oxidize, kwaye yomelele ngakumbi.
umgangatho wemveliso:Sinengxelo yovavanyo yesatifikethi sikazwelonke, ikwanomntu obelwe ngokukodwa ukuvavanya, iqinisekisa umgangatho womgangatho wemveliso. Siqinisekisa umgangatho weemveliso kwisithuba seminyaka emithathu ukuya kwemihlanu, kwaye aziyi kuphela kunye nomhlwa.
Egqithileyo I-CY-4 (iimpahla zombane ezikrelekrele)
Okulandelayo: I-CY-2 (yesiqhelo yangaphakathi yokutyhala yokutsala iimpahla)
Iingubo zokumisa umbane ukuma ngombane
Isixhobo sokomisa umbane ngombane
Iingubo zombane zokufaka iimpahla zokomisa impahla
Ingubo yombane isomisi kwendawo yokuhlala
Iimpahla zombane zeAirer Dryer